देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द, नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म सहकार्य नगर्ने कांग्रेसको Nepalpatra देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द, नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म सहकार्य नगर्ने कांग्रेसको
देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द, नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म सहकार्य नगर्ने कांग्रेसको निर्णय
१३ फाल्गुन २०७७, बिहिबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग सहकार्य नगर्ने भएको छ । नेपाली काँग्रेसले नेकपा विभाजनको टुंगो लागेपछि मात्र संसद् पुनःस्थापनाबाट विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
आज बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले नेकपाको वैधानिक विभाजनको प्रतिक्षा गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । साथै बैठकमा सभापति देउवाले नेकपाको केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै समूहबाट सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आएको भन्दै पार्टीका नेताहरुको राय मागेका थिए ।
अहिले सरकारमा जाने वा नेकपाका कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने अवस्था नरहेको छलफलले निष्कर्ष निकालेको हो । संसद पुनःस्थापना पछिको घटनाक्रमको विश्लेषणसँग पार्टीको आगामी रणनीति कसरी तय गर्ने भन्न विषयमा छलफल भएको हो ।
नेपाली काँग्रेसलाई जनताले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट दिएको भन्दै नेताहरुले सरकारमा जान हतार गर्न नहुने बताएका छन् । नेकपा विभाजन भएर सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आए मात्र यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने नेताहरुले राय दिएका छन् ।
यस्तै काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय प्रक्रिया अगाडी नबढी काँग्रेसको भूमिका नहुने भएकोले त्यसै अनुसार आफ्नो पार्टीले सल्लाह गरेर काम गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । पौडेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेर संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीलाई बचाएकोमा धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले किन बोलाए पदाधिकारी बैठक ?
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड-माधवकाे प्रस्ताव, होलान् त देउवा ?
देउवासँग २० मिनेट कुराकानी गरेर फर्किए प्रचण्ड र नेपाल, के भयो छलफल ?
प्रचण्ड-माधवले देउवालाई भेट्दै, मिल्ला त यी तीन नेताको केमेष्ट्री ?
ओली र नेपालवीचको आजको भेटवार्ता सकियो, के भयो निर्णय ?
होटल मेरियटबाट नवनिर्मित धरहरा दृश्यावलाेकन गर्दै ओली र नेपाल
माधव नेपालको स्पष्टीकरण : अलग पार्टी खोलेको भन्ने आरोप आपत्तिजनक
नेपालसहित १५ नेताको अपिल : हामीलाई एमालेमा बस्न नदिन दाउपेच भयो (पूर्णपाठ)
ओली र माधव नेपालबीच भेटवार्ता सुरु, एकता हुन सक्ने संकेत
पालिका मुकाममै साँघुरा सडक
पछिल्लो २४ घण्टामा १७३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २५१ जना संक्रमणमुक्त